ERR_SPDY_PROTOCOL_ERROR: ukuthi iphutha, indlela yokulungisa?
Ngaphandle kokuya le kangaka ikakhulukazi amaphutha kakhulu nezindlela ukulungiswa yayo, nje uqaphele ukuthi ahlukile lesipheqi se-Inthanethi i-Google Chrome noma ezinye izinhlelo zokusebenza kwezindlu kusekelwe kuyo. Ngokuvamile, abasebenzisi esikhundleni ukulandwa ikhasi lewebhu esikrinini umbiko ukwazisa ERR_SPDY_PROTOCOL_ERROR ukwehluleka. Yeka ukuthi lokhu kuyiphutha phambi kwethu, sizama ukuqonda. Thola izizathu nesenzakalo yayo, ukuze kamuva sikhulume mayelana nendlela yokubhekana nale nkinga.
ERR_SPDY_PROTOCOL_ERROR: onjani iphutha?
Ezimweni eziningi, unjiniyela olusemthethweni isiphequluli, inkampani yakwa-Google, incazelo ecace ngale mayelana nohlobo iphutha akusho, kungagcini incazelo ukuthi ukubukeka kwayo kubonisa kuphela isiphequluli abakwazi ukubonisa ikhasi ngesikhathi esibekiwe-URL ikheli. Nokho, njengoba umkhuba imibukiso, avame kwenzeka emnyango ethandwa zokuxhumana amasayithi kanye izinjini.
Ngokwesibonelo, ukwehluleka ERR_SPDY_PROTOCOL_ERROR «VKontakte" uma uzama ukungena ngemvume ku-inethiwekhi iphutha ezivamile. Ngeshwa, ngokusobala, isayithi uqobo kanye oyiyo zibhaliwe ngendlela yokuthi kusukela ukubukeka izinkinga esinjalo oVikelwe, futhi kwezinye iziphequluli athandwayo.
Ngezinye izikhathi, lokhu kusebenza futhi ethandwa izinjini. Ukwehluleka ERR_SPDY_PROTOCOL_ERROR «Yandex" ingekho kancane njalo. kungenzeka Nokho, kwanele Izizathu zalokhu, ngoba "sotsialok" futhi izinjini njengoba primary ngokuthi malware okungukuthi uma uzama ukufinyelela ikhasi isebenzisa izikripthi elisebenzisekayo ukuthi uvimbele idatha ukubonisa esizindeni. Kodwa mayelana konke ukuze.
Izinhlobonhlobo eyinhloko ukwehluleka
Kufanele kuqashelwe ngesikhathi esisodwa ukuthi igama amaphutha ERR_SPDY_PROTOCOL_ERROR nje ziyingxenye yale nkinga. Eqinisweni, kukhona izigaba eziningana ukwehluleka ezinjalo.
Phakathi ezivamile okulandelayo (ne ERR_ Isiqalo):
CONNECTION_RESET (ikhodi 101);
FAILD (ikhodi 2);
CONNECTION_FAILD (ikhodi 104);
NAME_NOT_RESOLVED (ikhodi 105);
CONNECTION_REFUSED (ikhodi 102);
PROTOCOL_ERROR (ikhodi yephutha ERR_SPDY_PROTOCOL_ERROR (kungacacisiwe, kodwa kunalokho ukuthola umlayezo othi ikhasi leWeb ayitholakali).
Nokho, kuzo zonke lezi ukwehluleka yohlobo olufanayo wasebenzisa indlela ukulungiswa. Cabangela ephumelela kunazo.
ERR_SPDY_PROTOCOL_ERROR: ukuthi iphutha, kanjani ukukulungisa ngendlela elula?
Njengoba singabona kusukela ukusikeka ukuthi ichaze uhlobo ukwehluleka, cishe bonke of them axhunyiwe noma nge-inthanethi noma nge ukungakwazi ukuhlonza iyiphi isayithi malware ngesici esithile. Ingahle oyiphawulile izilungiselelo engalungile isiphequluli (inothi, hhayi yezifiso nezilungiselelo-Windows).
Injalo elula, ezingasiza ukulungisa inkinga, ungazama ukuthayipha yekheli le-chrome umyalo: // net-internals / # nezinyawo, sabe ewindini elivelayo, chofoza uphawu «enethiwekhi Flush amachibi». Nakuba ilungelo kukhona isixwayiso ukuthi zingaphazamisa nokuboniswa Amakhasi uma uxhumeke, ngokuvamile kakhulu le ndlela nje kuyafana futhi ungakwazi balahle iphutha lapho lizama ukungena kabusha kusayithi (kuyinto efiselekayo kabusha isiphequluli uqobo).
Njengoba sekushiwo, ukwehluleka ukwelashwa ERR_SPDY_PROTOCOL_ERROR (lokho kuyiphutha, sizama ukuthola) kungasho njengoba imbangela yezinkinga ebukhoneni malware futhi isikimu esephepheni. Ngokuvamile akusiyo ngisho igciwane, njengoba evame ukubizwa ngokuthi namuhla, Adware noma-Malware. Kucatshangwa ngakho konke lokhu, abanye ngenhloso Izinsiza jikelele musa njalo ukubhekana nokukhishwa izingxenye ezifana.
Sam kunjiniyela uncoma ukusebenzisa izimali lalo. Ngokwesibonelo, i-"Vind" lokhu iphakethe Chrome ithuluzi lokuhlanza-Windows. Uma inkinga ibanjiwe uma usebenzisa "apula" izinhlelo, unjiniyela uhlongoza ukusebenzisa isicelo Finder, kulandele ukususwa "udoti" eqomeni.
Isula Amakhukhi amafayela alondolozwe okwesikhashana
Ngezinye izikhathi inkinga ingase ibe inombolo enkulu amafayela, "amakhukhi" nenqolobane zichichima lesiphequluli. Ukuze afeze ukuhlinzwa okunjalo kufanele uye izilungiselelo ingxenye, khetha imenyu kwedatha yomuntu siqu, bese usebenzisa inkinobho (noma umyalo) ususe umlando.
Lapha udinga ukuhlola wonke amafayela Cookie, futhi phezulu njengoba isikhathi ukuze abonise emgqeni "Ubude" (kwezinye izinguqulo - "Kusukela ekuqaleni"). Ezimweni eziningi, le nkinga zingaxazululeka yilo zibizwa ngokuthi nephutha UNQATSHELWE.
Ukuvimbela antivirus isiphequluli
Kunezimo lapho ngasizathu simbe isayithi noma ikhasi, kanye ne-software mhlawumbe emabhuloki isiphequluli efakwe antivirus. Lapha kubalulekile ukusebenzisa Uhlu olukhethekile, okuyinto etholakala noma iyiphi iphakheji yesofthiwe yalolu hlobo.
Empeleni le nkinga lihlotshaniswa Ukuvikelwa asebenzayo. Ngokwesibonelo, uhlelo avast kudingeka ukuya izilungiselelo eziyisisekelo, ukhethe ukwahlukanisa Ukuvikelwa esebenzayo, bese usebenzisa kwemigomo isistimu yamafayela kwesikrini lapho imenyu ekhethiwe okuhlukile. Qaphela: I-edingekayo izinqubo, amafayela noma Amakhasi izandiso kudingeka ukubeka umkhaza zonke izikhundla ezintathu:
R - ukufunda (ukufunda);
W - ukuqopha (bhala);
X - ukukhishwa (akhiphe).
Le nqubo kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe ngephutha SATHI. Uma inqubo noma ikhasi ohlwini ungekho, ungawafaka ngesandla usebenzisa izinkinobho ohambelana ngezansi. Ngemva kwalokho, kuyodingeka ukwenza izenzo ezifanayo ngokucacisa imvume yokusebenzisa nemingcele ngenhla.
Ungakwazi Ngokuqinisekile uzame futhi ukuze wenze izenzo okufanayo firewall, Nokho, imisebenzi enjalo afaneleka kakhulu kuphela ezimweni lapho kukhona ukungqubuzana kwezinhloso amagciwane futhi lokuvikela.
Lungiselela izilungiselelo proxy
Ayikho isimo bungavami, bheka, nanko, ngaphandle kwesizathu livela ERR_SPDY_PROTOCOL_ERROR, angabizwa ngokuthi siyilungiselelo ayilungile izilungiselelo zommeleli ubonise se-Google Chrome.
Kungaba lula ukulungisa inkinga. Siya isiphequluli, kuqala jikelele bese Izilungiselelo ezithuthukisiwe, khetha AC, bese ukwahlukanisa izilungiselelo zenethiwekhi kanye ukuxhumana. Lapha futhi izilungiselelo proxy ukushiya into emakwe usebenzise i-otho Sizing kuphela. Njengoba kusobala zonke ezinye izinto ahlale ubuningi. Manje uhlala kuphela ukuqinisekisa izinguquko. Ukuze aqiniseke ukuthi izinguquko ukuthatha nomphumela, kabusha uhlelo khompyutha, kodwa akuyona imfuneko njalo.
Nasi emfushane futhi zonke ohlobene ERR_SPDY_PROTOCOL_ERROR. Yini iphutha livela lapho ungena ku-ikhasi le-web, siba kuncane okwaziwayo ngaso. Njengoba ubona, empeleni, kusho ukulungisa inkinga behluleka, futhi ulula. Ukuze uhlupho abasebenzisi nge matemu hhayi ukuya ehlathini-computer, bengazange ngokuqondile. Enough ukwazi kuphela lokho okuchazwe izixazululo ukusebenza cishe ngaso sonke isikhathi. Futhi abasebenzisi abavamile, njengoba besho, akukho okunye okudingekayo.
It uhlala ukuze ungeze ukuthi inkinga, nakuba isiphequluli esingokwemvelo-Google Chrome, ungase futhi zenzeka kweminye imikhiqizo zidalwe e ngomfanekiso wakhe, isibonelo, okufanayo "Yandex Isiphequluli", 360 Browser, i-Chromium, nokunye. D. Nokho, bonke babo iphutha elifanayo eqondiswa, ngaphandle ukuthi amanye amamenyu nemiyalo kungenzeka ethé ukuhluka kancane, kodwa ngokuyisisekelo ayiguquki.